Ogwe ndọta ndọta: ngwa amabeghị na nke bara uru | Ngwaike efu
Isaac | 09/09/2021 09:00 | Ihe eletrọniki
N'ezie ọtụtụ amaghị maka ngwa a, ebe ọ bụ na ọtụtụ amaghị. Agbanyeghị, ọ nwere ike inyere gị aka nke ukwuu n'ọmụmụ ihe gị ma ọ bụrụ na i jiri obere kposara ma ọ bụ akụ na -arụ ọrụ. Na nke a ihe nkedo magnetik ị gaghị efu ha, mgbe ahụ ị gaghị akwa ụta na onye ahụ na -efu mgbe ị na -ahazi ọrụ gị.
Ọ na -adịkarị mgbe gị na ndị a na -arụ ọrụ iberibe ọla dị obere na ha ga -emecha fuo, mana na ngwa a ga -akwụsị ime, na nke gị akwụkwọ ozi, kposara, wdg, ị ga -enwe ha mgbe niile ...
1 Kedu ihe bụ tray magnetik?
1.1 Esi mee ya
2 Ebe ịzụta tray magnet
Kedu ihe bụ tray magnetik?
una tray magnetik Maka kposara ọ bụ okirikiri, ma ọ bụ tray square, nke a na -ejikarị igwe anaghị agba nchara na -emebi emebi. Ekele dịrị magnet nke ọ na -etinye na ntọala ya, ọ ga -edobe iberibe (mkpụrụ, mkpọchi,…) na ngwa igwe ka ha wee nọrọ ebe ị chọrọ ha, ọ nweghịkwa nke furu efu.
Na mgbakwunye, ha na -agụnyekarị nchekwa nke roba na ntọala ya, ebe ndọta na -adịgide adịgide, yabụ na ọ naghị amị amị ma jidekwa ọnọdụ. Yabụ ị nwere ike iji ya na ụdị ihu niile, site na tebụl ụlọ, ruo na oche ọrụ, ebe ndọba ụgbọala, wdg.
Iji ụdị ngwá ọrụ a dị nnọọ mfe. Enwere ike iji ya maka ndị na -eme ya na maka ọtụtụ ngwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ, gụnyere ụlọ nrụzi akụrụngwa kọmputa ebe a na -eji ọtụtụ obere kposara n'oge. disassembly na mgbakọ nke otu. Naanị ị ga -etinye tray ahụ n'elu, wee hapụ n'ime mpempe ọla niile ịchọrọ ka ị ghara ịla n'iyi.
Yabụ ị ga -enwe ha mgbe niile anya, ị ga -egbochikwa ha ịpụ na ebe ọrụ gị ma ọ bụ fuo ụzọ. Ihe dị mkpa karịsịa ma a bịa na iberibe ochie ma ọ bụ nke pụrụ iche nke anaghị arụpụta ...
Ebe ịzụta tray magnet
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta a tray magnetik ọnụ ala, ị nwere ike lee anya na ndụmọdụ ndị a:
Akụkụ magnetized tray 230x130 mm.
15 cm n'obosara magnetik nnukwu efere.
150cm dayameta gburugburu igwe anaghị agba nchara.
Ntọala ọkwá atọ nke 3, 15 na 11 cm n'obosara.
Ogwe Ngwá Ọrụ Magnetik. Enwere ike iji ya maka ogbako, ịtinye ngwa igwe gị na mgbidi, yana maka kichin, mma, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Ogwe ndọta ndọta: ngwa amabeghị na nke bara uru